Juventus Oo Bisha Janaayo Dooneysaa Ciyaaryahanka Khadka Dhexe Ee Borussia Dortmund Axel Witsel
HomeWararka CiyaarahaJuventus oo bisha Janaayo dooneysaa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Borussia Dortmund Axel Witsel
November 9, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay bisha Janaayo dalab ka gudbiso ciyaaryahanka khadka dhexe ee Borussia Dortmund Axel Witsel .
32 jirkaan qandaraaskiisu wuxuu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, taasoo la micno ah inuu ku heli karo beeca xorta ah haddii uu ku heshiin waayo heshiis cusub.
Dortmund ayaa la fahamsan yahay inay wali ka fiirsaneyso inay Witsel u soo bandhigto heshiis cusub iyo in kale, laakiin waxay ku fikiri kartaa inay lacag kaash ah ku iibiso Janaayo si ay uga fogaato inay wax lacag ah ku weyso xagaaga soo socda.
Kooxda Jarmalku waxay raadinaysaa inay qayb ka qaadato miisaaniyada mushaharkooda waxayna u aqoonsadeen inay iska dajiyaan xiddiga heerka caalami ee dalka Belgium, kaasoo ah mid ka mid ah kuwa ugu mushaharka badan, inay tahay dariiq macquul ah oo ay taasi ku sameeyaan.
Si kastaba ha ahaatee, dhaawacyada soo gaaray ciyaartoyda khadka dhexe ee Emre Can iyo Mahmoud Dahoud ayaa sare u qaadi karta suurtogalnimada inay sii haystaan ​​Witsel ilaa ugu yaraan dhamaadka ololaha.
Bild ayaa ku warameysa in Juventus ay ka fiirsaneyso inay Janaayo dalab ka gudbiso Witsel hadii Dortmund ay go’aansato inay iibiso, iyadoo sidoo kale xiiseyneysay saxiixiisa inta lagu guda jiro xagaagan.
Juve ayaa la filayaa inay sugto ilaa xagaaga si ay bilaash ugu soo qaadato haddii loo baahdo, laakiin tababare Massimiliano Allegri ayaa riixaya inuu bisha Janaayo la soo wareego sababtoo ah kooxdiisa ayaa ku dhibtoonaysa xilli ciyaareedkan.
Witsel ayaa ku soo bilowday sideed ka mid ah 10kii kulan ee ay Dortmund ciyaartay Bundesliga ilaa haatan xilli ciyaareedkan